Fraport June 2021 Traffic Mifananidzo: Kudzoreredza muPassenger Nhamba Inoenderera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Fraport June 2021 Traffic Mifananidzo: Kudzoreredza muPassenger Nhamba Inoenderera
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kwenguva yekutanga kubva pakatanga denda, Frankfurt Airport zvakare yakagashira vanopfuura zviuru makumi masere vatakuri pazuva rimwe chete, yakanyorwa mumazuva maviri akaparadzana muna Chikumi 80,000.
Kukura kwekukura mumotokari yekutakura zvinhu kuRA kwakaramba kuchienderera kunyangwe kushomeka kuri kuramba kuchiita kwedumbu kunowanzo kupihwa nendege dzevatakurwi.
Nhandare dzeFraport Group kutenderera pasirese dzakanyorawo kukura kwekufamba kwemotokari munaJune 2021.
Muna Chikumi 2021, traffic yevafambi yakaramba ichidzoka, kunyangwe hazvo kuenderera uye kwakapararira kwehutachiona hweCOVID-19. Nhandare yeFrankfurt (FRA) yakashandira vamwe 1.78 mamirioni vafambi mumwedzi unoshuma. Izvi zvinomiririra kuwedzera kweanoda kusvika mazana maviri muzana maringe naJune 200. Zvisinei, huwandu uhu hwakavakirwa pamutengo wakaderera wakatarwa muna Chikumi 2020, apo traffic yaive pasi pakati pehuwandu hwehutachiona hwe COVID-2020.
Mumwedzi wekuburitsa, kudzikira kweiyo COVID-19 zviitiko zvemitero pamwe nekusimudzwa kwekurambidzwa kwekufamba kwakaramba kuchikanganisa kudiwa kwemotokari. Kwenguva yekutanga kubva pakatanga denda, Frankfurt Airport zvakare yakagashira vanopfuura zviuru makumi masere vevatakuri pazuva rimwe chete, rakanyorwa mumazuva maviri akaparadzana munaJune 80,000.
Kana ichienzaniswa neye pre-denda muna Chikumi 2019, FRA yakanyoreswa kumwe kuoneka kwevatakuri kuderera kwe73.0 muzana mumwedzi wekuzivisa. Pakati pehafu yekutanga ya2021, FRA yakashandira vafambi vanosvika mamirioni 6.5. Zvichienzaniswa nenguva imwechete yemwedzi mitanhatu muna 2020 uye 2019, izvi zvinomiririra kuderera kwe46.6 muzana uye 80.7 muzana zvichiteerana.
Slovenia's Ljubljana Airport (LJU) akagamuchira 27,953 vafambi mumwedzi wekuburitsa. Panhandare yendege yeBrazil yeFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA), traffic yakazara yakakwira kune vafambi 608,088 806,617. Muguta guru rePeru, Lima Airport (LIM) yakagamuchira vatakuri 2021 XNUMX muna Chikumi XNUMX.